Microsoft Teams Integration ho an'ny Google Ads
clever ads Midira amin'ny MS Teams
Midira amin'ny MS Teams
Microsoft Teams Integration ho an'ny Google Ads , Microsoft Ads &amp; Facebook Ads
Raiso mivantana ny fanairana fanaingoana ao amin'ny chat Microsoft Teams
Asaivo kisary natao manokana ho an'ny dokam-barotra kaonty.
Fandaharam-potoana mba handray ny mari-pandrefesana amin'ny isan'andro na isan-kerinandro, na fototra.
Ampio amin'ny Microsoft Teams
Mamonjy ny fotoana!
Tehirizo ny fotoananao sarobidy amin'ny alàlan'ny fahitana ireo Google Ads , Bing Ads ary Facebook Ads manan-danja indrindra amin'ny toerana iray. Akatona ny sasany amin'ireo kiheba ireo!
Mandamina ny asa isan'andro mahomby kokoa
Amin'ity fampidirana ity dia azonao atao ny mampiasa metrika, kisary ary fampandrenesana handinihana ny fizotry ny fampielezan-kevitrao, amin'ny alàlan'ny Microsoft Teams !
Clever Ads , tsy toy ny fitaovana hafa mitovy eny an-tsena, dia tsy mitaky sarany hampiasanao azy.
Sivano ny ads tianao ary mahazoa famintinana fampisehoana amin'ny alàlan'ny metrika sy ny kisary.
Midira amin'ny dashboard anao ary afaka manaingo manokana ny fomba fandraisanao ny mari-pahaizana amin'ny alàlan'ny Microsoft Teams . Sivano izay kaonty tianao hojerena, alamino ny tatitra ataonao ary ataovy amboary ny fanairana anao .
Fa maninona no apetraka ny rindrambaiko Clever Ads Microsoft Teams ?
Ny metrika manan-danja dia ho hita mivantana amin'ny alàlan'ny Microsoft Teams . Ireto metatra ireto dia mety ho fientanam-po, tsindry ary maro hafa, rehetra mifandraika amin'ny Google Ads sy Bing Ads-nao.
Ampiasao ny sary amin'ny maso mandinika ny fivoaran'ny misy ny mari-pandrefesana. Na fahatsapana, vidiny, na ny fiovam-po tahan'ny.
Asaivo safidy handray isan'andro na isan-kerinandro famintinana, ka hahatonga azy ireo ho vahoaka ho an'ny ekipa mba hahita, na ny masonao ihany.
Hanome toro-hevitra momba ny fanatsarana ny Google Ads paikady amin'ny fangatahanao. Azontsika atao ny manome torohevitra momba ny fampielezan-kevitra ataonao toy ny fanitsiana ny tetibola, ny fanovana ny tariby, ary ny maro hafa.
Afaka iray minitra eo dia azonao atao ny manampy ny Clever Ads ho an'ny Microsoft Teams mivantana ao amin'ny kaontinao.
Download ny fampiharana
Ny sisa ataonao dia tsindrio ny bokotra "Add to Microsoft Teams " dia ho azonao izany
Midira ao ny mpanao dokam-barotra ny kaonty
Midira ao amin'ny Google, Facebook, sy / na ny Microsoft Account izay mifandray amin'ny ny dokam-barotra kaonty
Fidio ny kaonty
Rehefa mifidy ny tantara tiany, dia aza misalasala mifamadika akory ny hafa na oviana na oviana
Mampiasa ny lafiny maro ny fampiharana
Raiso avokoa ny tatitra voalaza etsy ambony ary conveniently seamlessly